यी ४बलिउड नायिकाः जसको “डिम्पल” मा फिदा छ पूरै विश्व….! – Gorkhali Dainik
October 5, 2020 602
दुनियामा कि त सिम्पलको चर्चा हुन्छ कि त डिम्पलको। तर आज यहाँ हामी सिम्पलको कुरा नगरी डिम्पलको चर्चा गर्नेछौँ । मानिसमा सुन्दरता भने निकै बिशेष हुन्छ ।
यसमा नि कुन अंगले सुन्दरता देखाउने हुन्छ र जाे काेहि मानिस पनि सुन्दर बन्न चाहान्छन् । त्यस्तै, बलिउड सुन्दर नायिकाले भरीपूर्ण छ।
बलिउडमा रहेका गरेक नायिकाहरुको आफ्ना-आफ्नै छुट्टै विशेषता छन्। कोहि सुन्दरताको कारण चर्चामा हुन्छन् त कोहि अभिनयको कारण । तर केहि नायिकाहरु भने गालामा बान्ने डिम्पलको कारण चर्चामा हुने गर्छन्। तर गालामा डिम्पल भएकी युवतीहरुलाई निकै मन पराउँछन् पुरुषहरुले ।
दुनियामा डिम्पल मन नपराउने मानिस को पो होला र ? संसारमा निकै कम मानिसमा हुन्छ डिम्पल । जुन केटिकाे हास्दा डिम्पल पर्छ, त्यस्ता युवतीले दुनियाँ फिदा बनाउँछन् त्यस्तै दुनियाँ फिदा बनाउने केहि बलिउड नायिकाबारे चर्चा गर्दैछाै ।
बलिउडमा छोटो समयमै स्थापित भएकि नायिका हुन् आलिया भट्ट । उनकाे अभिनयको भन्दा सुन्दरताको विषयलाई लिएर निकै चर्चा हुने गर्छ । उनकाे सुन्दरतालाइ केन्द्रविन्दु बनाएर फ्यानले चर्चा गर्छन् । आलियाको गालामा पर्ने डिम्पलको पनि कयौं प्रशंसक छन्।
डिंपल गर्ल को नामबाट बलिउडमा प्रीतिकाे नाम निकै चर्चित छ । उनकाे अभिनय, सुन्दरता लगायत डिम्पलको कारणले गर्दा निकै चर्चित छिन् । प्रीतिको डिम्पलले धेरै युवा लाेभिएका छन्। नायिका प्रिती फिल्मि क्षेत्रबाट टाढा भएकि छिन् तर, उनकाे डिम्पलको चर्चा भने बेलाबेला भइरहेकाे हुन्छ।
नायिका दिपिका पादुकोण बलिउड नायिका मध्ये निकै धनि नायिकामा पर्छिन् र उनले बलिउडका नायिका भन्दा माेटाे पारिश्रमिक लिएकि हुन्छिन् । बलिउडमा जस्तै हलिउडमा पनि उनकाे निकै चर्चा हुने गर्छ। दीपिका पनि डिम्पलको कारण चर्चाको विषय बन्ने गरेकी छिन्। दीपिकाको गालामा बन्ने डिम्पलले सुन्दरतामा बढाउने काम गरेको छ।
बिपाशा बोल्डनेसको कारण अत्याधिक चर्चामा रहने गर्छिन्। लामो समय देखि अभिनयमा सक्रिय रहेकी बिपाशाले अहिले सम्म कयौं हिट चलचित्र दिसकिन्। बिपाशाको डिम्पलको पनि चर्चा हुने गरेको छ।
Prev१४ वर्षीया बालिका बेदना- ‘बाबा ‘करणी’ गर्ने, आमा चुपचाप बस्ने, म कहाँ जाउँ …?
Nextअनाथालयलाई …..दिपक र दीपाश्रीले…कपडा प्रदान र एक वर्षको घरभाडा पनि तिरिदिने…!